Abathatha imfucuza balwa ne-Covid | Scrolla Izindaba
Bangabonakala njengabantu abahudula izinqola bethatha imfucumfucu ezitaladini enihlala kuzo. Kepha manje laba besilisa nabesifazane bayasiphephisa ngokumelana ne-Covid-19.
Uma ugibela itekisi noma ungumthengi, bakugcina uphephile.
Abantu obabona besebenza yibo bonke abathatha imfucuza engekho emthethweni baqeqeshelwe ukuhlanza izindawo zomphakathi njengezitolo ezinkulu zokuthenga nasemarenki yamatekisi. Baqhamuka kwi-Wastepreneurs, inhlangano ephethwe yi-Supplier Development Initiative (SDI).
Iphethwe yindodana kamengameli, u-Andile Ramaphosa, i-SDI isiqeqeshe abathathi bemfucumfucu abangama-30 ukusiza ukulwa nalesi sifo.
Umholi wabo, uGodfrey Phakedi, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi abathatha imfucumfucu bashaywe kanzima yimithetho yomvalelo. “Abesilisa nabesifazane baphila ngabakwenza ngezandla ukuze bezothola okuya ethunjini manje njengoba kuwumvalelo, ayikho imali abayenzayo.”
Kodwa ke, uGodfrey ungcome inhlangano i-SDI ngokubasiza ngamaphasela okudla nezinye izidingo ngalesi sikhathi esinzima. “Izikhulu zakwa-SDI bezisiza abathatha imfucuza, abangenamakhaya, onogada bezimoto nalabo abama emarobhothini endaweni yaseGoli,” usho njalo.
Uthe iqembu liqeqeshelwe ubungozi be-covid-19, ukuthi bangahlala kanjani bephephile, nokuthi bangazisebenzisa kanjani izitshizi zesifutho.
UGodfrey uthe ujabule ngokuthola ithuba lokusebenza. “Ngizoba umuntu ojabule kakhulu uma umsebenzi ungaqhubeka kuwona wonke amalungu angama-30 bese ngidlulisela nakwabanye abaningi,” usho njalo.
ULindiwe Scheepers uthi ujabule ngokuthola lo msebenzi. “Bengithatha imfucuza ngase-Emmarentia kule minyaka emibili edlule.”
“Ngaphambi kwalokho, bengingasebenzi. Angizange ngiwuthole umsebenzi ngase ngathatha isinqumo sokuthatha nokuthengisa imfucuza ukuze ngizokwazi ukuphila. ”
Abathatha imfucumfucu babamba iqhaza ekuhlanzeni okujulile kuzo zombili izindawo zase-Sandton Taxi Rank nase-Pan Africa Mall Taxi Rank e-Alexandra. Izikhulu eziningi zikaNgqongqoshe wesifundazwe nabamele imeya yaseGoli bebekhona ukuzobona umsebenzi wabo.
“Lokhu kwenza ukuthi abasebenza ngodoti bakwazi ukuthola imali ngesikhathi somvalelo,” kusho umsunguli we-SDI uBrad Fisher. “Futhi siyabagqugquzela ngokwenza okufanele ngalesi sikhathi sokuqubuka kwe-covid-19.”